GetProspect: Raadi Cinwaannada Emailka B2B iyo Maareynta Liisaska Rajada | Martech Zone
GetProspect: Raadi Cinwaanada Email B2B iyo Maareynta Liisaska
Jimco, Oktoobar 2, 2020 Jimco, Oktoobar 9, 2020 Douglas Karr
In kasta oo aanan jeclayn in spam la igu diro, waa inaan qiraa inay jiraan waqtiyo dadku heleen cinwaankayga oo ay ila soo xiriireen ganacsi sharci ah. Xaqiiqdii, dhab ahaan waxaan kireystay dhowr qandaraaslayaal oo waxaan ka iibsaday dhowr meelood oo ka mid ah emaylladaan dibadda u baxa ee aan la ii dirin ee la ii soo diray.
Taasi waxay tiri, waxaan rajeynayaa in qaab ixtiraam leh loo helo isgaarsiintan:
Research - Waxaan rabaa inaan ogaado in si gaar ah la iigu gartay ujeeddo gaar ah.
waxkabadalka - Waxaan rabaa qofka inuu ii sheego si sax ah ujeedka ujeedkiisu iyo rajadiisa.
Ka bixida - Waxaan rabaa hab aan uga baxo dacwada oo aanan waligey helin emayl kale haddii aysan khusayn.
Waagii hore, sidoo kale waxaan sameeyay (gaaska) lama qiyaasi karo iyo liisaska emailka badan iibsatay. Runtii waa warshad farshaxan jilicsan, in kastoo, sidaa darteed fursadahaaga wax u dhimayaan sumcaddaada iyo in lagaa xiro iimaylaha iibiya ayaa sarreeya. Haddii aad tan sameyso, waxaad sifiican ugu dhex socotaa liiska adoo adeegsanaya aaladda sirdoonka emaylka si aad u hubiso inaadan soo dejineynin emayllada dabinka spam iyo emayllada soo kici doona
Hesho waa ururinta la raadin karo cinwaanada email oo ay weheliso mishiinka sirdoonka ee haaya diiwaanada ilaa imika. Si fudud u soo gal shuruudahaaga raadinta iyo soo saaraha emaylkeena waxay ku siin doonaan liiska magacyada emayllada shirkadaha, booska, URL-ka cinwaanka LinkedIn, magaca shirkadda, warshadaha, websaydhka, iyo wax badan oo dheeri ah!
Maareynta Hesho GetProspect
GetProspect waxay bixisaa is dhexgal weyn oo lagu soo dejiyo, lagu raadiyo, lagu shaandheeyo, lagu abaabulo, loona dhoofiyo rajooyinkaaga
Astaamaha Maareynta 'ProPpectpect Prospect Management' waxaa ku jira:
Liisaska - Ku qoro boggagaaga xogta aad soo saartay liistada. Ku dalbo magac, shirkad, jago, iwm.
Isdhexgalka - Soo dhoofso ama dhoofiso rajadaada in ka badan 750 barnaamij oo ay ka mid yihiin Linkedin, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp, Mailgun, iyo G Suite.
Kooxda - Waxaad ku martiqaadi kartaa kooxdaada inay wadaagaan qorshahaaga si ay uga caawiso helitaanka rajooyinka si dhakhso leh.
Dhoofinta Excel - Dhoofinta xiriirka laga helay faylka XLS oo leh emayllo laga soo saaray iyo macluumaad kale.
Soo Dejinta Jumlada - Raadi liiska emaylka hal mar. Kaliya soo dhoofso feylasha ay ku jiraan magacyo iyo macluumaadka shirkadda oo ka hel emayllada tiro ahaan.
Company Info - Raadi macluumaad waxtar leh sida bogga shirkadda, cinwaanka jirka iyo lambarka taleefanka, tirada shirkadda, tirada shaqaalaha, iyo in ka badan.
Saxiix Oo Hel Cinwaanada E-maylka 200 Bilaash
Shaacinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyahayga xiriirka u ah Hesho - isticmaal lambarka 6rE12 si aad u hesho 200 cinwaanno iimayl oo rajo leh!
Tags: b2bhel cinwaanka emaylkahel cinwaanada emaylkaka hel cinwaanno emayl ah LinkiyadaisweydaarsigsuiteLinkedIniibin